Ihe kacha mma 24 Bird Tattoos Echiche Echiche Maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị - Atụmatụ Echiche Tattoos
Ihe kacha mma 24 Bird Tattoos Echiche Echiche maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị
Ị hụtụla ụdị mma nnụnụ? N'ezie ị nwere. Ụra ndị a bụ nwanyị mgbe a na-eji ya na ụmụ nwanyị ma mara mma nke ukwuu ịhụ.
A maara nnụnụ dị ka ndị nwere onwe n'efu bụ ndị mere ọtụtụ ndị ji na-egwupụta ya. Ọ nwere ike jikọta ya na ọtụtụ ihe na ndụ ma nke a bụ ihe mere ị ga - eji chọta ndị nwoke na ndị inyom na - eji ya. Ụfọdụ ndị mmadụ na-ejikọta tattoo #bird na ụmụ amaala, nnwere onwe, udo, ịhụnanya, ihe ọmụma, ọgụgụ isi, ịdị mma, mma, ezinụlọ, nne, nduzi ime mmụọ na ọtụtụ nza.
A na-eme ka a na-eme ka a na-egbu nri dị iche iche ka ọ bụrụ ihe dị mma ma dị iche iche. Nke a bụ otu n'ime ihe mere ndị mmadụ ji ahọrọ ya maka ụdị aghụghọ ndị ọzọ. E nwere ụdị aghụghọ dị iche iche nke nnụnụ na-enwe ihe dị iche. Ọ bụ gị ga-ekpebi ụdị nnụnụ ị chọrọ iji banye n'ime ahụ gị. Nnụnụ na-abịa nha na ụdị na onye nke ọ bụla nwere ihe pụrụ iche banyere ha. Ndị nwere mmasị ịga maka nnwere onwe ma ọ bụ echiche nke ịbụ ndị na-adị ndụ nwere ike ịga maka akara ngosi a pụrụ iche. A na-etinye ọnya nnụnụ na akụkụ ọ bụla nke ahụ na-enweghị ya na ọ pụtara na ọ furu efu nakwa na ọ nwere ike ịkọ ọtụtụ ihe banyere mmadụ.
A maara nnụnụ na-adọrọ adọrọ na ndị mara mma. Egwuregwu ọ bụla nnụnụ nwere ihe atụ na ọtụtụ ndị na-eji ya eme ihe dị ka ndị ogbugbo n'etiti nwoke na chi. isi iyi
Anyị nwere ike ịkọrọ gị ụfọdụ mkpịsị nnụnụ tupu ị chee na ị na-eji ha eme ihe. Enwere ike iji egbugbu egbugbere ọnụ na-anọchite anya ala na-abaghị uru na ịdị ala. Akwụkwọ Nsọ jiri ya mee ihe iji gosipụta owu ọmụma na ịnọ naanị. isi iyi
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ dị na Japan, ọ na-anọchite anya iguzosi ike n'ihe n'oge na akụkọ ifo Gris, a na-ejikọta ya na ọmụmụ nwanyị na chi nwaanyị bụ Aphrodite. isi iyi
Ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịchọta egbu egbu, mgbe ahụ, ị ​​na-ekwu banyere ọmụmụ na ndụ ọhụrụ. Nye ndị nọ n'Africa, ilo na-anọchite anya ọcha mgbe ndị nọ na China na-ahụ ogbe dị ka obi ụtọ di na nwunye. isi iyi
Atụmatụ Nnụnụ dị mma maka gị
Otu n'ime mkpịsị azụ nnụnụ bụ egbugbu Dove nke na-anọchite anya ịdị ọcha, ịdị nwayọọ, udo na mkpụrụ obi ọcha. Mgbe ị hụrụ abụọ nduru ndị nọkọtara ọnụ, ị nwere ike ikwu banyere ikwesị ntụkwasị obi na ịhụnanya alụmdi na nwunye. Kedu ihe gbasara Swan tattoos? isi iyi
Swam na-anọchite anya nrubeisi na ntụkwasị obi mgbe ọ Grik, ọ bụ chi nwanyị Venus. Ndị na-aga maka akwara stork, chọrọ ichere ọmụmụ na mmiri. isi iyi
Mkpuru ahụ na-anọchite anya ọmụmụ na mmiri ma na-ewe ihe dịka nṅomi n'ihi na a maara mpempe akwụkwọ. Otú ọ dị, a na-ewere na a na-eme ka a na-eji mmiri ozuzo, amụma, ịhụnanya na karma na Hindu. isi iyi
Na China, a pụrụ ikwu na Crane bụ ezigbo omenala. Ụfọdụ na-akpọ ha onye na-eweta obi ụtọ na ịhụnanya ma ọ bụ ndị ozi nke chi. isi iyi
Iji nweta ezigbo nsị nke nnụnụ igbu egbu bụ ihe ị ga-ebu ụzọ tụlee. Ị kwesịrị ijide n'aka na ị tụlere onye na-egbu egbu na-aga ịbịaru gị. isi iyi
Mgbe i mechara nke a, ị nwere ike ikwu banyere onye gburu egbu. E nwere ebe nrụọrụ weebụ ebe ị nwere ike ịhụ ezigbo onye tattooist maka mkpịsị aka gị. N'ikpeazụ, ọ dị gị mkpa ịbịaru n'akụkụ ahụ nke ị na-ewere zuru oke maka igbu egbugbu gị. Kedu ihe ị na-eche banyere nnụnụ ndị a? isi iyi
Nnụnụ bụ anụ ndị mara mma nke na-atọ anyị ụtọ mgbe anyị hụrụ ha. Anyị nwere ike ọ gaghị enwe ohere ịhụ nnụnụ ndị a na-adakwasị anyị ma anyị nwere ihe ùgwù nke ime ka ha tinye anyị n'ahụ. Nnụnụ nnụnụ ahụ aghọwo egbu egbu na-ewu ewu nke onye ọ bụla nwere ike iji. isi iyi
E nwere nnụnụ dị iche iche; ụlọ obibi na nnụnụ ọhịa nke ụdị na ụdị niile. Nnụnụ ọ bụla nwere ihe dị mkpa nke bụ ihe kpatara anyị kwesịrị iji kpachara anya maka ụdị igbu egbugbu nke anyị ga-eji. isi iyi
Were dị ka ọmụmaatụ, ụlọnga ma ọ bụ ugoloọma ejikọtara ya na anwansi ojii na amoosu mgbe a maara nke ọma nduru nduru iji gosi udo na ịdị ọcha. isi iyi
Ọ dị mkpa ka ị ghọta na nsị igbu egbu egbu aghọwo ihe dị mkpa. Ị kwesịrị iji oge anyị nyochaa site na ntanetịime ntanetị nke nnụnụ tupu ị họrọ ịhọrọ. isi iyi
Oge mbu ị ga - eme bụ onye na - egbu egbu nke ga - agwa gị ihe dị mma. I kwesịrị iche echiche banyere àgwà ndị nnụnụ ndị ị na-ahọrọ nwere. isi iyi
Mgbe ị na-ahụ akara dị ka nke a, ị gaghị enyere ma lelee ya anya. Ọ bụrụ na ị bụ nwanyị ma na-achọ ihe ink iji guzo naanị ma dị ike na ọha na eze, ị nwere ike ịga maka aka nnụnụ a na-ejikọta okooko osisi. isi iyi
Fashionistas amụtala otú e si eji ejiji eme ihe na ọkwa ọzọ mgbe ọ na-abịakwute ọnyà nnụnụ. Ị nwere ike ịme ihe dị iche mgbe ịchọrọ ịkwapụ ya mgbe ị nwere nnukwu nnụnụ nnụnụ dị ka nke a. isi iyi
Mgbe ị hụrụ egbu a, ị ga-ahụ ha n'anya. Mma nke egbu a na-eme ka ha dị oke mma. Echegbula onwe gị ọbụlagodi na ị bụ nwoke n'ihi na ahụ gị ga-anabata ụdị ụdị a. isi iyi
Ọ dịghị onye na-ahụ ụdị ọnwụ a ma ọ gaghị ahụ ya n'anya. Ụdị egbu egbu dị ịtụnanya ma ndị na-ese ya bụ ndị nwere anya maka ihe ọma. isi iyi
Ị nwere ike izute onye tattooist gị iji nyere gị aka ịme egbu egbu a n'ahụ gị. isi iyi
Mgbe ị na-agwakọta okwu na nnụnụ dịka egbugbu, ị ga-enweta nnukwu ihe magburu onwe ya dị ka nke a. Kedu ka ị na-achọ egbu egbu a? isi iyi
iri na abụọ - ise =
Ụdị ekpomkpaazụ azụegbugbu maka ụmụ agbọghọndị mmụọ oziegbu egbu osisi lotusmma tattoosenyí egbu egbuegbu egbuNtuba ntughariUche obiaka akanduru akwarazodiac akara akaraarịlịka arịlịkaụmụnne mgbuakwara isiakara ntụpọAnkle Tattoosdi na nwunyeegbugbu egbugbuna-adọ aka mmaọnwa tattoosegbu egbu egbuudara okooko osisienyi kacha mma enyincha nrọechiche egbugbuegbu egbu maka ụmụ nwokeaka akaegbu egbu diamondnnụnụna-egbu egburip tattoosakwara obiaka mma akadragọn dragọnụkwụ akaọdụm ọdụmmehndi imeweokpueze okpuezeakpụkpọ ụkwụ na-egbuke egbukendị na-egbuke egbukengwusi pusin'olu oluEgwu ugoegbu egbu egbuegbu egbu ebighi ebiagbụrụ eboegbu egbu hennaegbu egbu mmiri